Dhizairo Mabasa Yenhare muAnchorage, Alaska
Alaska ((teerera); Aleut: Alax̂selelê; Inupiaq: Alaasikaq; Alutiiq: Alas'kaaq; Tlingit: Anáaski; Russian: Аля́ска, romanized: Alyáska) inzvimbo iri kuchamhembe kwakadziva kumadokero kweUnited States West Coast. Kubata Strait kubva kuAsia. Chikamu cheUS, chinoganhurwa Canadian mudunhu reBritish Columbia nenharaunda yeYukon kumabvazuva nekumaodzanyemba kwakadziva kumadokero uye ine muganho wegungwa neRussia Chukotka Autonomous Okrug kumadokero. Kumaodzanyemba kune makungwa eChukchi uye Beaufort eArctic Ocean, nepo Pacific Ocean iri kumaodzanyemba uye maodzanyemba akadziva kumadokero. Alaska ndiyo huru yeUS nyika nharaunda uye yechinomwe mukurusa subnational chikamu pasi. Iyi ndiyo yechitatu yakanyanya kuva nevanhu vazhinji uye ine vanhu vakawanda, asi kusvika kunzvimbo ine vanhu vazhinji vanowanikwa munzvimbo dzekuchamhembe kwemakumi matanhatu, nehuwandu hwevanhu vanosvika 738,432 kunge gore ra2015 - zvichidarika zvakapetana vanhu vazhinji veNorth Canada neGreenland. Inenge hafu yevagari veAlaska vanogara mukati meguta reAnchorage. Guta guru reJuneau ndiro guta rechipiri mukurusa muUnited States nenzvimbo, ine nzvimbo dzakawanda kupfuura zvayakaita Rhode Island neDelaware. Alaska yakagarwa nevanhu vakasiyana-siyana vemumaruwa kwezviuru zvemakore vasati vauya kuEurope. Iyo nyika inotariswa nzvimbo yekupinda nekugadziriswa kweNorth America nenzira yeBering land bridge. MaRussia vaive vekutanga vasiri vanhu vemunyika kuti vagadzirise nzvimbo iyi kutanga muzana ramakore regumi nemasere, pakupedzisira vachisimbisa koloni yeAlaska iyo yakawedzera nzvimbo dzazvino. Iko kurasikirwa uye kuoma kwekuchengetedza iyi nzvimbo iri kure kwakakurudzira kutengeswa kwayo kuUS muna 1867 pamadhora mazana manomwe emakumi manomwe emadhora, kana inenge masenti maviri pahekita ($ 4.74 / km2). Iyi nharaunda yakafamba shanduko dzinoverengeka dzekutonga isati yatanga kurongwa seyunharaunda muna Chivabvu 11, 1912. Yakatambirwa sechi 49 yenyika yeUS munaJanuary 3, 1959.Ipo iine imwe diki yenyika hupfumi munyika, yeAlaska capita mari iri pakati peyepamusoro, nekuda kwehupfumi hwakasiyana-siyana hunodzorwa nehove, gasi rechisikigo, uye mafuta, ese ayo akawanda. United States mauto ane zvigadziko uye kushanya zvakare chikamu chakakosha chehupfumi; inopfuura hafu yenyika inopihwa mari neveruzhinji, kusanganisira masango emunyika, mapaki, uye nzizi dzemusango. Vagari vomuAlaska vagari vemo ndivo vakanyanya kune chero nyika yeUS, vanopfuura gumi neshanu muzana. Vanenge vangangoita gumi nemaviri mitauro yemitauro inotaurwa, uye Alaskan MaNational vanoita zvine hunyanzvi mune yezvematongerwo enyika uye enyika.
Dhizaini ndiko kusikwa kwechirongwa kana gungano rekuvaka chinhu, hurongwa kana hukama hwevanhu (seyakavakirwa zvivakwa, kudhirowa zviga, mashandiro ebhizinesi, wedhiramu dhizaini, uye maitiro okusona).  Dhizaini ine zvirevo zvakasiyana muminda dzakasiyana (ona maitiro ekugadzira pazasi). Mune zvimwe zviitiko, kuvakwa kwakananga kwechinhu (senge muumbi, injinjini, manejimendi, kukodha, uye grafiki dhizaini) inofungidzwazve kushandisa mafungiro ekugadzira. Kugadzira zvinowanzodiwa zvichitaridza runako, runoshanda, hupfumi, uye hukama hwemunhu hwese hwekugadzira chinhu uye dhizaini yekuita. Zvinogona kusanganisira kutsvakisisa kufunga, kufunga, kutevedzera, kushandira pamwe, uye kudhanirazve. Zvichakadaro, mhando dzakasiyana dzezvinhu dzinogona kuve dzakagadzirwa, kusanganisira zvipfeko, grafiti mushandisi, skyscrapers, kuzivikanwa kwehukama, bhizinesi maitiro, uye kunyangwe nzira kana matanho ekugadzira.  Saizvozvo "dhizaini" inogona kuve yekureva inoreva kuchamurwa kwechinhu chakasikwa kana zvinhu (dhizaini yechimwe chinhu), kana chiito chechiitiko chechisiko sezvinojekeswa nemamiriro emutauro. Icho chiitiko chekugadzira uye kugona.